बाबु भनिएका बिनयलाई भनिन् म मुखले होइन कामले ज.वाफ दिने मान्छे हुँ : सपना – Gazabkonews
बाबु भनिएका बिनयलाई भनिन् म मुखले होइन कामले ज.वाफ दिने मान्छे हुँ : सपना
बिबिसीमा मेरो नाम आयो भन्दैमा म मेरो काम रोक्दिन, अझै जिम्मेवारी सहित काममा छु, बाबु भनिएका बिनयलाई भनिन् म मुखले होइन कामले ज.वाफ दिने मान्छे हुँ, लामो समयपछि रहस्य खोलीन् सपना रोका मगरले, हेर्नुहोस् भिडियो
सपना रोका मगर को हुन् ? हिजोका दिनसम्म कसैले चिन्दैन थिए । नजिकबाट चिन्नेले घृ.णा गर्थे सपनालाई । उनीहरुले भन्थे, ‘.छ्या, यस्तो काम पनि गर्ने हो ?’ सिमित व्यक्तिले सपनालाई ‘सा.हसी युवती’ भन्दै तारिफ गर्थे । तर, सपनालाई न तारिफको जरुरत थियो, न त कसैको घृ.णाबाट वि.लचि.त नै थिइन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले सन् २०२० का प्रेरणादायी र प्रभावशाली १०० महिलाका रूपमा छनोट भएपछि सपनाको पहिलो भनाइ थियो, ‘के म त्यही सपना हुँ ?’ अर्थात् सुरुमा पत्यारै लागेन । तर, जब म्यासेस र मोबाइलमा बधाईका घण्टी बज्न थाल्यो, तबमात्र उनी सपनाबाट व्यूझिन् । र, एउटा कुनामा लुकेर आँ.सु खसाइन् । त्यो आँसु खुसीको नभएर आफ्नो विगत र वर्तमानको थियो उनको । ‘त्यो क्षण मलाई सपनाजस्तै लाग्यो’ एक अन्तर्वातामा भनेकी छन्, ‘नेपालीले नबुझेपनि मेरो काम विश्व (बीबीसी)ले बुझेको रै’छ । भोलीका दिन पनि मेरो कामको यसरी नै सम्मान हुन्छ ?’
तर, सपनाको परिचय बदलिएको छ । बिबिसीमा मेरो नाम आयो भन्दैमा म मेरो काम रोक्दिन, अझै जिम्मेवारी सहित काममा छु, बाबु भनिएका बिनयलाई भनिन् म मुखले होइन कामले जवाफ दिने मान्छे हुँ, लामो समयपछि रहस्य खोलीन् सपना रोका मगरले, हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडाैंमा अब एटिएमले दिन्छ पिउने पानी
काठमाडौं, २९ माघ । काठमाडौं उपत्यकामा तपाईलाई प्यास लाग्यो भने कसरी पानी पिउनुहुन्छ ? राजधानीमा सार्वजनिक धारा, कुवा छैनन् । शहरी क्षेत्रमा ती संरचना पाउन पनि मुस्किल नै हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भए त सहजै पाइन्थ्यो ।
काठमाडौं उपत्यकामा कि त पसलमा गएर बोत्तलको पानी खरीद गर्नुपर्छ । त्यसो नभए चुपचाप बस्नुपर्छ । यसअघि राजधानीमा नागरिकले सहजरुपमा पानी पिउन पाउने अवस्था थिएन । पसलमा खरीद गरिने पानी पनि मूल्यका आधारमा असाध्यै महङ्गो हुने गरेको छ ।
प्यास लाग्दा पानी पनि नपाउने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले काठमाडौं महानगरभित्र पहिलो चरणमा स्वचालित प्रणालीबाट पानी पिउन पाउने प्रणालीको विकास गरेको छ । सरकारले त्यसलाई वाटर एटिएमको नाम दिएको छ ।
एटिएम भन्नेबित्तिकै पैसा निकाल्ने मेशिनको चित्र हामी सबैको दिमागमा आउँछ । किनकी नेपालीले देखेको पनि र प्रयोग गरेको पनि त्यही हो । सरकारले काठमाडौंमा सहजरुपमा पिउने पानीका लागि वाटर एटिएम राखेर नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिने प्रणालीको विकास गरेको छ । यसले आमरुपमा नागरिकलाई राहत दिनेछ । वाटर एटिएमबाट पानी पिउनका लागि निश्चित पैसा भने तिर्नुपर्नेछ ।
खानेपानी मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आजदेखि काठमाडौंमा वाटर एटिएम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
आज एक कार्यक्रमकाबीच खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापाले वाटर एटिएमको उद्घाटन गरे । सरकारको योजनाअनुसार पहिलो चरणमा रत्नपार्क, बालाजु र स्वयम्भु भगवान् पाउमा वाटर एटिएम सञ्चालन गरिएको छ ।
वाटर एटिएमबाट पानी लिनका लागि उपभोक्ताले एक रुपैयाँका सिक्का प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौ्र उपत्यका खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणाका अनुसार आगामी तीन साताभित्र राजधानी काठमाडौंका विभिन्न १५ स्थानमा त्यस्ता एटिएम जडान गरिनेछ । राणाका अनुसार एटिएमबाट कसरी पानी निकाल्ने भन्नेबारेमा बुझिने भाषामा जानकारीसमेत राखिएको छ ।
विवरणअनुसार आगामी एक साताभित्र कलङ्की, मालपोत, बानेश्वर, बङ्गलामुखी मन्दिर, कसुन्ती यातायात कार्यालय र शङ्खपार्क धूम्रबाराहीमा पनि वाटर एटिएम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा पनि त्यस्तै संरचना जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइने खानेपानी मन्त्रालयको भनाइ छ ।